“Ndichapedza Upfambi Hwako”—Ezekieri 16:41
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Ashaninka Awajun Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiQuechua (Lambayeque) ChiTamil (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chirungu (Liberia) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kiluba Kirghiz Kiribati Kongo Korean Lithuanian Luganda Luvale Luxembourgish Malay Malayalam Mapudungun Maya Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Otetela Pangasinan Pehuenche Pemon Piaroa Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Chimborazo) Quichua (Tena) Rapa Nui Romanian Romany (Chile) Romany (Romania) Russian Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Shuar Silozi Slovak Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Warao Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
“Ndichapedza Upfambi Hwako”
ZVATICHADZIDZA: Zvatinodzidza pakutsanangurwa kunoitwa pfambi dzinotaurwa mubhuku raEzekieri neraZvakazarurwa
1, 2. Imhando ipi yepfambi ingaita kuti tisemeswe chaizvo?
ZVINORWADZA kuona munhu ava pfambi. Tinoshaya kuti chii chingadaro chakaita kuti apedzisire azvidzikisira zvakadaro. Airohwa kana kushungurudzwa kumba here zvekuti akapedzisira ava kungomberereka mumigwagwa achiri mudiki? Kana kuti nhamo ndiyo yakaita kuti apedzisire ava kutengesa muviri wake here? Kana kuti aitiza murume aishusha here? Nyaya dzinosuwisa dzakadai dzinogara dzichiitika munyika ino yakaipa. Saka hazvitishamisi kuti Jesu Kristu akabatsira dzimwe pfambi, akadzibata zvakanaka. Akasimbisa kuti vaya vaipfidza vochinja mararamiro avo vaizorarama upenyu huri nani.—Mat. 21:28-32; Ruka 7:36-50.
2 Asi, ngatimbofungai nezveimwe mhando yepfambi. Fungidzira mukadzi anozvisarudzira ega kurarama upenyu hwakadaro. Haaoni upenyu hwakadaro sehunomudzikisira, asi anotofunga kuti hunomuita kuti aonekere! Chaanoda imari nemukurumbira zvinobva pakuita basa iri. Zvingatonyanya kurwadza kana zvikaitika kuti mukadzi uyu aiva nemurume akanaka, akavimbika, asi akazosarudza kumusiya kuti aite upfambi. Hapana angatadza kusemeswa nemukadzi akadaro nemararamiro aanenge asarudza kuita. Kusemeswa kwatinoitwa nemunhu akadaro ndiko kwakaita kuti kakawanda Jehovha Mwari aratidze maonero aanoita chitendero chenhema nekuchifananidza nepfambi.
3. Tichakurukura ndima dzipi dzemuBhaibheri muchitsauko chino?
3 Bhuku raEzekieri rine nhoroondo mbiri dzinoshandisa upfambi kufananidzira kusatendeka kwevanhu vaMwari vemuJudha neIsraeri. (Ezekieri chitsauko 16 ne23) Asi tisati taongorora ndima idzodzo, zvakanaka kuti timboona nezveimwe pfambi yekufananidzira. Upfambi hwayo hwakatanga Ezekieri asati atomboberekwa, kunyange rudzi rwevaIsraeri rusati rwatombovako, uye huchiri kuenderera mberi nanhasi. Pfambi iyi inotaurwa nezvayo mubhuku reBhaibheri rekupedzisira raZvakazarurwa.
4, 5. “Bhabhironi Guru” chii uye tinozviziva sei? (Ona mufananidzo uri panotangira chitsauko chino.)
4 Munenge muna 96 C.E., Jesu akapa muapostora Johani chiratidzo chaiva nemumwe mukadzi anoshamisa. Anonzi “pfambi huru” uye “Bhabhironi Guru, amai vepfambi.” (Zvak. 17:1, 5) Vatungamiriri vechitendero nevamwewo vanoongorora Bhaibheri vava nemazana emakore vasinganzwisisi kuti pfambi iyi ndiani. Vanotaura zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti inomiririra Bhabhironi, Roma, kana kuti Chechi yeRoma. Asi Zvapupu zvaJehovha zvatova nemakumi emakore zvichinzwisisa chinomiririrwa ‘nepfambi huru’ iyi. Pfambi iyi inofananidzira zvitendero zvese zvenhema zvakabatanidzwa. Tinozviziva sei?
5 Pfambi iyi inopiwa mhosva yekuita upombwe “nemadzimambo epanyika,” kana kuti vezvematongerwo enyika. Saka zviri pachena kuti iyo pachayo haisi yezvematongerwo enyika. Uyewo, bhuku raZvakazarurwa rinoratidza “vanhu vanotengesa panyika,” kana kuti vanoita zvemabhizinesi munyika ino, vachichema kuparadzwa kweBhabhironi Guru. Saka Bhabhironi Guru haringanzi rinomiririra mabhizinesi makuru. Zvino rinomiririrei? Rinonzi rine mhosva yekuita “zvinhu zvemidzimu,” kunamata zvidhori uye kunyengera vanhu. Mhosva idzi hadzienderani here nezvinoitwa nemasangano ezvitendero akaipa emunyika ino? Cherechedzawo kuti pfambi iyi inonzi yakatasva, kana kuti ine simbawo pane vanoita zvematongerwo enyika. Inotambudzawo vashumiri vaJehovha Mwari vakatendeka. (Zvak. 17:2, 3; 18:11, 23, 24) Handizvo here zvanga zvichiitwa nechitendero chenhema kusvikira nhasi?
MuBhabheri, rakazonzi Bhabhironi, ndimo makatangira tsika, dzidziso, nemasangano ese ekunamata kwenhema (Ona ndima 6)
6. Nei Bhabhironi Guru richinzi “amai vepfambi”?
6 Asi nei Bhabhironi Guru richinzi “pfambi huru” uyewo “amai vepfambi”? Chitendero chenhema chine masangano asingaverengeki. Kune machechi nemapoka asingaverengeki. Kubvira pakavhiringidzwa mitauro muBhabheri, kana kuti Bhabhironi, dzidziso dzenhema dzakawanda dzakapararira, zvichibva zvatanga zvitendero zvakawanda zvisingaperi. Zvakakodzera kuti “Bhabhironi Guru” ritore zita raro kuguta reBhabhironi, kwakatangira zvitendero zvese zvenhema! (Gen. 11:1-9) Saka zvitendero zvese izvi zvinogona kuonekwa “sevanasikana” vesangano rimwe chete, pfambi huru imwe chete. Satani anowanzoshandisa zvitendero zvakadaro kukwezva vanhu kuti vaite zvemidzimu, kunamata zvidhori, uye kutenda dzidziso nekuva netsika dzinoshoresa Mwari. Ndokusaka vanhu vaMwari vachiyambirwa nezvesangano iroro rakaipa riri panyika yese vachinzi: “Budai mariri vanhu vangu, kana musingadi kubatanidzwawo muzvivi zvaro”!—Verenga Zvakazarurwa 18:4, 5.
7. Nei tichiteerera yambiro yekuti ‘tibude’ muBhabhironi Guru?
7 Wakateerera yambiro iyoyo here? Yeuka kuti Jehovha pachake ndiye akasika vanhu vaine chido ‘chekutungamirirwa’ naye kana kuti kumunamata. (Mat. 5:3) Chido ichocho chinongogona bedzi kuzadziswa kana tichinamata Jehovha zvakachena. Vashumiri vaJehovha vagara vachida kutambira kure neupfambi hwekunamata. Asi Satani Dhiyabhorosi ane chinangwa chekukwezva vanhu vaMwari kuti vaite upfambi uhwu. Kakawanda kacho, akabudirira. Pakazosvika nguva yakararama Ezekieri, vanhu vaMwari vakanga vava nenguva vachimboita upfambi hwekunamata. Zvakanaka kuti tiongorore zvavakaita, nekuti zvinogona kutidzidzisa zvakawanda nezvezvinodiwa naJehovha, kururama kwake, uye tsitsi dzake.
8-10. Ndechipi chimwe chezvinhu zvinokosha zvinodiwa kuti kunamata kunzi kwakachena chinogona kutibatsira kunzwisisa kuti Jehovha anonzwa sei nezvekubatana nezvitendero zvenhema? Taura muenzaniso.
8 Mubhuku raEzekieri, Jehovha anoshandisa mufananidzo wepfambi achitaura sekuti ndiye pachake ari kuzviitirwa. Ezekieri akafemerwa kunyora ndima mbiri dzairatidza kurwadziwa kwakaitwa Jehovha nekusatendeka kwevanhu vake vaiita zvakaipa. Nei akavafananidza nepfambi?
9 Kuti tinzwisise mhinduro yacho, tinofanira kutanga tayeuka chimwe chezvinhu zvinokosha zvinodiwa kuti kunamata kunzi kwakachena chatakakurukura muChitsauko 5 chebhuku rino. MuMutemo waakapa vaIsraeri, Jehovha akati: “Usava nevamwe vanamwari kunze kwangu. . . . Ini, Jehovha Mwari wako, ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara.” (Eks. 20:3, 5) Akazosimbisa chokwadi ichocho achiti: “Usakotamira mumwe mwari, nekuti Jehovha anozivikanwa kuti anoda kuzvipira kwakazara. Iye ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara.” (Eks. 34:14) Nemashoko iwayo Jehovha akanyatsoita kuti nyaya iyi ijeke. Anongogamuchira kunamata kwedu kana tichinamata iye chete.
10 Chimbofunga nezvevanhu vakaroorana. Murume wacho kana kuti mudzimai ane kodzero yekutarisira kuti waakaroorana naye avimbike kwaari. Kana mumwe wavo akadanana kana kurara nemumwe munhu, waakaroorana naye haangambotadza kunzwa godo uye kurwadziwa. (Verenga VaHebheru 13:4.) Panyaya yekunamata, Jehovha anorwadziwawo kana vanhu vake vakazvipira kwaari vakamusiya vachinonamata vanamwari venhema. Anotsanangura kurwadziwa uku achishandisa mashoko akasimba muchitsauko 16 chaEzekieri.
11. Jehovha akatii nezveJerusarema uye matangiro aro?
11 Chitsauko 16 chaEzekieri ndicho chine mashoko aJehovha akawanda nekure kupfuura ezvimwe zvitsauko zvese zvebhuku racho aakataura asina kumbomira. Uye ndiyo imwe yendima dzakareba dzine mashoko euprofita muMagwaro echiHebheru. Jehovha anotaura nezveguta reJerusarema richimiririra vaJudha vasina kutendeka. Anotaura nyaya inosiririsa uye inovhundutsa yematangiro akaita guta iri nekuzopanduka kwarakaita. Rakatanga riri kasvava kakaraswa kakanhongwa kaine tsvina uye kasina anochengeta. Vabereki vekamwana kacho vaiva vaKenani vemunyika yacho vakanga vasinganamati Jehovha. Ichocho ichokwadi nekuti Jerusarema rakanga rava nenguva richitongwa nerimwe dzinza revaKenani, rainzi vaJebhusi, kusvikira parakazokurirwa naDhavhidhi. Jehovha akanzwira tsitsi kasvava ikako, akakagezesa nekukachengeta. Nekufamba kwenguva, rakanga raita semudzimai wake. Tingatoti vaIsraeri vakazosara vogara muguta iroro vatoita sungano naJehovha, yavakapinda mairi mumazuva aMozisi vasingaiti zvekumanikidzwa. (Eks. 24:7, 8) Pashure pekunge Jerusarema rava guta guru renyika yacho, Jehovha akarikomborera, akaita kuti ripfume uye akarishongedza, sezvinogona kuita murume akapfuma ane simba anopa mudzimai wake zvishongo zvakanaka.—Ezek. 16:1-14.
Soromoni akarega madzimai ake achimuita kuti asvibise Jerusarema nekunamata zvidhori (Ona ndima 12)
12. Kunamata vamwe vanamwari kwakatanga sei muJerusarema?
12 Ona zvakazoitika. Jehovha akati: “Wakatanga kuvimba nerunako rwako, ukava pfambi nemhaka yemukurumbira wako. Wakaita chipfambi chisingaiti nemunhu wese aipfuura, uye vaiita zvavanoda newe.” (Ezek. 16:15) Mumazuva aSoromoni, Jehovha akakomborera vanhu vake akavapfumisa zvekuti Jerusarema rakava guta rakanaka chaizvo, raionekera kupfuura mamwe ese mazuva iwayo. (1 Madz. 10:23, 27) Asi vanhu vakatanga kunamata vamwe vanamwari. Achida kufadza madzimai ake akawanda ekune dzimwe nyika, Soromoni akatanga kusvibisa Jerusarema nekunamata vanamwari vechihedheni. (1 Madz. 11:1-8) Uye vamwe vakazotonga pashure pake vakatoita zvinopfuura ipapo, vachisvibisa nyika yese nekunamata kwenhema. Jehovha akanzwa sei neupfambi hwekunamata uye kupanduka kwakadaro? Akati: “Zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuitika; hazvifaniri kumbofa zvaitika.” (Ezek. 16:16) Asi vanhu vake vakapanduka vakatowedzera kuita zvinhu zvakaipa!
Vamwe vaIsraeri vakapa vana vavo sezvibayiro kuna vanamwari venhema vakadai saMoreki
13. Vanhu vaMwari vaiva muJerusarema vaiva nemhosva yei?
13 Chimbofunga kurwadziwa uye kusemeswa kwaiita Jehovha paaifumura uipi hwevanhu vake vaakanga asarudza achiti: “Wakatora vanakomana vako nevanasikana vako vawakanga wandiberekera, uye wakavabayira kuzvidhori kuti vaparadzwe. Upfambi hwauri kuita hahusati hwakwana here? Wakauraya vanakomana vangu, uye wakavapa sezvibayiro uchiita kuti vapfuure nemumoto.” (Ezek. 16:20, 21) Zvinhu zvinotyisa kudaro zvavakaita zvinotiratidza kuipa kwakaita mwoyo waSatani. Anoda chaizvo kukwezva vanhu vaJehovha kuti vaite zvinhu zvakadaro zvinosemesa! Asi Jehovha anozviona zvese. Mwari anogona kugadzirisa kunyange zvinhu zvinotyisa chaizvo zvakaitwa nevanhu vachifurirwa naSatani uye achapa mutongo wakakodzera.—Verenga Jobho 34:24.
14. Mumufananidzo wakataurwa naJehovha, ndivanaani vaiva mukoma nemunin’ina weJerusarema, uye pakati pavo vari vatatu ndiani akanga aipa kupfuura vamwe?
14 Asi Jerusarema harina kana kumbovhunduka nezvakaipa zvaraiita. Rakaramba richiita upfambi hwaro. Jehovha akati raitonyadzisa kupfuura dzimwe pfambi nekuti raibhadhara vanhu kuti vaite upfambi naro! (Ezek. 16:34) Mwari akati Jerusarema rakanga rangofanana “naamai” varo, kureva madzinza aisanamata Jehovha aimbogara munyika yacho. (Ezek. 16:44, 45) Achienderera mberi nemufananidzo wacho wemhuri, akataura kuti mukoma weJerusarema aiva Samariya, iro rakatangira Jerusarema kuita upenyu hweupfambi hwekunamata. Mwari akataurawo nezvemunin’ina weJerusarema, Sodhoma, richishandiswa sedimikira nekuti rakanga ratova nemakore raparadzwa nemhaka yekuzvikudza kwaro uye tsika dzaro dzakaora. Pfungwa yaibudiswa naJehovha ndeyekuti Jerusarema rakatoita zvakaipa kupfuura mukoma nemunin’ina waro, Samariya neSodhoma! (Ezek. 16:46-50) Vanhu vaMwari vakayambirwa kakawanda vasingateereri uye vakaramba vachirarama upenyu hwavo hwekupandukira Mwari.
15. Chinangwa chaJehovha chekupa Jerusarema mutongo chaiva chei, uye izvi zvaipa vanhu vake tariro yei?
15 Jehovha aizoita sei nazvo? Akaudza Jerusarema kuti: “Ndichaunganidza vaya vese vanokuda, vawakafadza” uye “ndichakuisa mumaoko avo.” Marudzi echihedheni aimbotsigirana nevanhu vake aizoriparadza, orisiya risisina runako nezvinhu zvaro zvinokosha. Akatiwo: “Vachakutema nematombo, vokuuraya nemapakatwa avo.” Jehovha aizovapa mutongo uyu nechinangwa chei? Chakanga chisiri chekuti vanhu vake vapedzisire vasisiko zvachose. Akabudisa chinangwa chake paakati: “Ndichapedza upfambi hwako.” Mwari akawedzerawo kuti: “Ndichakuratidza hasha dzangu dzese, uye kukutsamwira kwandakaita kuchapera; uye ndichasara ndagadzikana ndisisina kugumbuka.” Sezvakakurukurwa muChitsauko 9 chebhuku rino, chinangwa chaJehovha chaiva chekudzorera vanhu vake kunyika yavo pashure peutapwa hwavo. Aizozviitirei? Akati: “Ndichayeuka sungano yandakaita newe pawaiva mudiki.” (Ezek. 16:37-42, 60) Jehovha aizoratidza kuti akasiyana nevanhu vake pakuti akavimbika zvikuru!—Verenga Zvakazarurwa 15:4.
BHOKISI REKUDZIDZISA 15A: Mukoma Nemunin’ina Pfambi
16, 17. (a) Nei tisisiri kuti Ohora naOhoribha vanomiririra chiKristu chenhema? (Ona bhokisi rakanzi “Mukoma Nemunin’ina Pfambi.”) (b) Tinodzidzei muzvitsauko 16 ne23 zvaEzekieri?
16 Achishandisa mashoko akawanda uye ane simba ari muchitsauko 16 chaEzekieri, Jehovha anotidzidzisa zvakawanda nezvemitemo yake yakarurama, kutonga kwaanoita zvakarurama, uye tsitsi dzake huru. Tinodzidzawo zvinhu izvi muchitsauko 23 chaEzekieri. Mazuva ano vaKristu vechokwadi vanoshandisa zvidzidzo zvakajeka zvavanowana paupfambi hwakaitwa nevanhu vaJehovha. Hatitombodi kurwadzisa Jehovha sezvakaitwa neJudha neJerusarema! Saka tinoda kusiyana nekunamata zvidhori kwese. Izvi zvinosanganisira kuva nemakaro uye kuda pfuma, izvo zvinogonawo kunzi kunamata zvidhori. (Mat. 6:24; VaK. 3:5) Tinoda kuratidza kuti tinotenda tsitsi dzakaratidzwa naJehovha paakadzorera kunamata kwakachena mumazuva ano ekupedzisira uye kuti haazombosiyi kuchisvibiswa zvakare! Akaita “sungano . . . inogara nekusingaperi” naIsraeri waMwari, isingazomboputswi nekusavimbika kana upfambi. (Ezek. 16:60) Saka ngatikoshesei chikomborero chatiinacho chekubatana pamwe chete nevanhu vaJehovha vakachena mazuva ano.
17 Asi mashoko aJehovha kupfambi dzinotaurwa muna Ezekieri anotidzidzisei ‘nezvepfambi huru,’ Bhabhironi Guru? Ngationei.
18, 19. Pfambi dzinotaurwa muna Ezekieri dzakafanana papi nepfambi inotaurwa muna Zvakazarurwa?
18 Jehovha haachinji. (Jak. 1:17) Maonero aanoita kunamata kwenhema haana kumbobvira achinja kubvira pakatanga pfambi iyoyo huru. Saka hazvitishamisi kuona zvinhu zvakawanda zvakafanana pakati pemutongo wakapiwa pfambi dzinotaurwa mubhuku raEzekieri nezvichaitika ‘kupfambi huru’ inorondedzerwa mubhuku raZvakazarurwa.
19 Semuenzaniso, cherechedza kuti pfambi dzinotaurwa muna Ezekieri hadzina kurangwa naJehovha pachake, asi nenyika dzadzakaita upfambi hwekunamata nadzo. Zvitendero zvese zvenhema zvabatanidzwa zvinotongerwawo mhosva yekuita upombwe hwekunamata “nemadzimambo epanyika.” Uye ndiani achashandiswa kuzviranga? Tinoverenga kuti vezvematongerwo enyika ‘vachavenga pfambi uye vachaiparadza nekuipfekenura, uye vachadya nyama yayo uye vachairoromesa nemoto.’ Nei hurumende dzenyika dzichaita zvinhu zvinoshamisa kudaro? Nekuti Mwari achazviisa “mumwoyo mavo kuti vaite zvaari kufunga.”—Zvak. 17:1-3, 15-17.
20. Chii chinoratidza kuti mutongo uchapiwa Bhabhironi uchabva waritsakatisa?
20 Saka Jehovha achashandisa hurumende dzenyika ino kuti ape mutongo wake kuzvitendero zvese zvenhema, kusanganisira machechi ese anozviti ndeechiKristu. Mutongo uyu uchabva waritsakatisa; panenge pasisina mukana wekukanganwirwa kana wekuchinja. Bhuku raZvakazarurwa rinoratidza kuti Bhabhironi “harizombowanikizve.” (Zvak. 18:21) Ngirozi dzaMwari dzichapemberera kuparadzwa kwaro dzichiti: “Rumbidzai Jah! Utsi hunobva [pariri] hunoramba huchipwititika nariini nariini.” (Zvak. 19:3) Mutongo uyu uchagara uripo nekusingaperi. Hapana chitendero chenhema chichazombosiyiwa chichitanga zvakare, chichisvibisa kunamata kwakachena. Bhabhironi parichapiwa mutongo waro unopisa semoto uye parichaparadzwa, zvichaita sekuti richaramba richipwititika utsi nekusingaperi.
Nyika dzava nenguva dzichikwezvwa uye dzichifurirwa neBhabhironi Guru dzicharipandukira dzoriparadza (Ona ndima 19, 20)
21. Chii chichatanga pachaparadzwa zvitendero zvenhema, uye zvichazoguma nei?
21 Hurumende dzenyika ino padzichaparadza Bhabhironi Guru, dzichange dzichitopa mutongo waMwari, rinova danho guru pakuzadziswa kwechinangwa chaJehovha. Aya ndiwo matangiro achaita kutambudzika kukuru kusati kwamboitika. (Mat. 24:21) Kutambudzika ikoko kuchazonyatsopisa paAmagedhoni, hondo yaJehovha yaacharwisana nenyika ino yakaipa. (Zvak. 16:14, 16) Sezvatichaona muzvitsauko zvinotevera zvebhuku rino, bhuku raEzekieri rine zvakawanda zvarinotiudza nezvekuti kutambudzika kukuru kuchatanga sei. Asi parizvino, zvidzidzo zvipi zvatinowana muzvitsauko 16 ne23 zvaEzekieri zvatinoda kuyeuka uye kushandisa?
Hurumende dzenyika ino dzichapandukira Bhabhironi Guru dzichiripa mutongo waMwari (Ona ndima 21)
22, 23. Kuongorora rondedzero yepfambi dzinotaurwa muna Ezekieri nemuna Zvakazarurwa kunoita kuti tione sei kunamata kwatinoita Jehovha?
22 Satani anoda kusvibisa vaya vari kunamata zvakachena. Hapana chingamufadza kupfuura kuona tichisiya kunamata kwakachena toita zvakaitwa nepfambi dzinotaurwa mubhuku raEzekieri. Saka tinofanira kuyeuka kuti Jehovha anoda kuti iye chete anamatwe, pasina anokwikwidzana naye; haadi munhu asina kuvimbika! (Num. 25:11) Tinongwarira kuti tisaswedera pedyo nezvitendero zvenhema, kureva kusabata “chinhu chisina kuchena,” mukuona kwaMwari. (Isa. 52:11) Izvi ndizvo zvinoitawo kuti tirambe tisina divi rezvematongerwo enyika ratinotsigira munyika ino isina kubatana. (Joh. 15:19) Tinoona kuda nyika yatinogara sechimwe chitendero chenhema chinosimudzirwa naSatani, uye tinosiyana nacho.
23 Kupfuura zvese, ngatiyeukei kuti kunamata Jehovha mutemberi yake yemweya yakachena chikomborero chaicho. Tichikoshesa urongwa uhwu, ngatisambofa takabatana nezvitendero zvenhema neupfambi hwazvo!
Nei zvakakodzera kuti zvitendero zvenhema zvifananidzwe nepfambi?
Pfambi dzinotaurwa muzvitsauko 16 ne23 zvaEzekieri dzinotidzidzisei nezvemaonero anoita Jehovha kunamata kwenhema?
Chii chichaitika kuzvitendero zvenhema uye tinofanira kuita sei iye zvino?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ndichapedza Upfambi Hwako”
rr chits. 15 pp. 162-171